Homeसमाचारदु:खमा साथ दिएकी श्रीमती पो’इल गएकै भएपनि, फर्केर आउ भन्दै श्रीमान रुँ’दै मिडियामा (भिडियो सहित)
April 2, 2021 admin समाचार 5437
मोरगंको उर्लावारी ४ का मोहन राजवंशी १२ वर्ष साउदीमा बसेर प’सिना बगाए । उनी अव घरमै बस्ने र परिवारसंग समय वि’ताउने योजननामा नेपाल फर्किए । विवाह भएको वर्षौ पछि वुढेस’कालमा श्रीमती हरा’एपछि अहिले उनका श्रीमान रुँदै मिडियामा सार्व’जनिक भएका छन् । उनले दुखमा साथ दिएकी श्रीमती पो’इला गएकै भएपनि फर्केर आए आफुले स्वी’कार गर्ने बताएका छन् ।
एक साता अघि विदेशवाट नेपाल आएका मोहनले अहिले पनि श्रीमतीलाई फर्केर आउन आ’ग्रह गरेका छन् । उनीहरुका दुई छोरा र एक छोरी हुर्की’सकेका छन् । दुई छोरा मध्य एक छोरा २२ र अर्का १४ वर्षका छन्, छोरी २४ वर्षकी भइ’सकिन् । उनीहरुको विवाह गर्नु’पर्ने वेलामा श्रीमती जिवन परियारसंग हिडेपछि पुरुष अहिले रुँदै मिडियामा आएका छन् । जसका लागि दुख गर्न भन्दै वि’देश गएका थिए उनै परिवारले वुढे’सकालमा यस्तो धो का दिए प छि उनलाई वि ष खा उँ की भनने लाग्छ, उनले दुख म’नाउ गर्दै भनेका छन् ।
छोराछोरी घरमै हुँदा आमा हिडे’की हुन् । छोराछोरीले माघमा आमाको ब्यवहार देखेर शं ‘का गरेका थिए । उनीहरुले आमालाई सोधे । एक जना साथीको बुवाले कान्छो छोरालाई बो’लाएर आमाको बारेमा सुनाएका थिए । तेरो आमाले अर्कै पुरुषलाई भेट्ने गरेको हामीले देखेका छौं भनेर कान्छा छोरालाई सु’नाइदिए, उनले आमालाई आएर सोधे आमाले छोराछोरीको कसम खाएर त्यस्तो होइन भनेपछि छोराछोरीलाई पनि विश्वा’स लागेको बताए ।
आमालाई गाउँलेले शं’का गरेका पुरुष गाउँकै हुन् । बैंकको ब्यालेन्स सकेको र घरमा भएको गरगहना सबै लिएर गएको छोराछोरीले नै बता’एका छन् । उनका श्रीमानले पनि अब उनी आफुसंग भन्दा अर्कैसंग खुसी हुने भए उतै जान भन्दै आफ्नो सम्प’त्ती भने फिर्ता दिन आग्रह गरेका छन् । यदि श्रीमती फिर्ता आउन चाहे स्वी’कार गर्ने पनि बताएका छन् । कहिले काँही त जिवन नै सकिदिउँ की जस्तो लाग्ष्छ, उनले भने १२ वर्ष विदेशमा बसेर कमा’एको सम्पत्ती पनि छैन श्रीमती पनि छैनन् । १२ वर्ष विदेशमा बसेका श्रीमानले जव अब म घर आउँछु पैसा पठाउन सक्दिन भनेर खबर पठाएपछि श्रीमान घर आइपुग्नु पहिले नै श्रीमतीले घर छोडेकी छन् । उर्लावारी ४ आइतवा’रीका मोहनको यस्तो अवस्था भएको हो । उनको श्रीमती हराएको एक महिना हुन लागेको छ ।
दुख&मा साथ दिएकी श्रीमती हो, घरमा पैसा नहुँदा कति दुख सहेकै हो तर अब घरमा भरीपुर्ण भ’एपछि किन ग ल्ती गरेर श्रीमती हिँडी, श्रमिानले के भन्ला भन्ने लागेको हो भने पनि म माफी दिएर स्वीकार गर्छु । समाजलाई पनि मैले नै सम्झाउँछु उनले आफ्नो पी डा पोख्दै सुनाए । उनले दुखमा साथ दिएकी श्रीमतीको साथ खो’जेको बताए । इताजा खबरबाट
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, प्रति’तोला कति पुग्यो ? थाहा पाउनुहोस्
April 19, 2022 admin समाचार 1252
सुन`चाँदी बजारमा आज छापा`वाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले घटेर रु एक लाख दुई हजार १०० पुगेकोे छ । अघि`ल्लो दिन उक्त सुन प्रतितोला रु एक लाख दुई हजार ५०० मा कारो`बार भएको थियो
August 25, 2020 admin समाचार 21207
नेपालमा थप ७ कोरोना संक्रमि’तको नि’धन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निय’मित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले को’रोना पुष्टि भएका १ महिला र ६ जना संक्रमितको नि’धन भएको जानका’री दिनुभयो । काठमाडौं
March 27, 2021 admin समाचार 5453